Zvakanakira Dog Mumupfekero Tables - China Ningbo Haoshu Yinjiang Jintangli
The tafura rwoga anoisa imbwa yenyu panguva yakakunakira yakakwirira nokushambidzika. Haufaniri kudzidza pamusoro kana kuedza awkwardly nomuroori imbwa yako achiri kana iye ari pamakumbo ako. Asi, netafura kushambidzika rinoisa imbwa panguva akakwana yakakwirira nokushambidzika.
Zvinenge zvose imbwa kushambidzika matafura kuuya dzimwe mhando vasiri pitikoti pamusoro - regai kutenga chimwe kutoti paine ribbed padding dzimwe mhando pechifukidziro chiri nyore kuti imbwa wako rokuona kana. Imbwa yenyu ichava nyoro uye anogona vapedzisire uye Vaiisa kana pemvura ngozi. Uyezve, vazhinji kuzvishambidza matafura aripowo simbi ruoko uye rinoenda kundorangwa anogona kushandiswa kuchengeta imbwa yako zvakanaka panzvimbo panguva pfeka.
Step mberi danho kure
With kana hydraulic kana yemagetsi imbwa nokushambidzika matafura, unogona kuderedza tafura anenge ose nzira pasi. Ichi chikuru chinoratidza kuti imbwa kuti rinorema kana ari kunzwa zvishoma ndakati kana akasimbisa. Pane kushandisa simba kutakura imbwa kuti kushambidzika nzvimbo, iwe nyore kushandisa leash kufamba imbwa angonanga tafura. Kana nekushambidzika yapera, kudzikisa tafura uye vane imbwa kufamba kure.
Post nguva: Aug-09-2018